अहिलेको वर्षा बालीलाई अमृतसरह | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
अहिलेको वर्षा बालीलाई अमृतसरह
फागुन २१, २०७६ बुधबार १३:३०:५७ | डा. हरिकृष्ण उप्रेती
साधारणतया हिउँदको समयमा कम पानी पर्छ । यो बेला लामो समयसम्म पानी नपर्ने हुँदा सबैतिर सुख्खा हुन्छ । हरेक वर्ष हिउँदको समयमा बालीलाई सिँचाइ कसरी गर्ने भन्ने किसानलाई चिन्ता हुन्छ । तर यसपालिको मौसम किसानको लागि असल मित्रजस्तै बनिदिएको छ । सिँचाइ दिन पर्ने बेलामा मौसमले साथ दिँदा बालीनालीलाई फाइदा पुगेको छ ।
भर्खरै सिँचाइ गरेका गहुँबाली वा मुसुरोका दालमा भने अहिलेको पानीले असर पनि गर्न सक्छ । तर यसलाई जोगाउन पानी जम्ने खालका चिम्टाइलो माटो भएको खेतबारी छ भने निकास दिनुपर्छ । आली काटेर वा नाला काटेर तुरुन्तै पानीको निकासा दिन सकिन्छ । यी दुई बाहेकका बालीलाई भने अहिलेको पानी अमृतसरह हो ।
खेतीपाती गर्ने र व्यवसायिक फलफूल, तरकारी खेती गर्नेले यतिबेला परेको पानीको फाइदा लिन सक्छन् । यतिबेला आँप, आरु र आलुबखडालगायत सबैजसो फलफूलको फूल फूल्ने सम्भावना भएकाले यो सिँचाइ गर्नु पर्ने समय हो । यस्तो समयमा वर्षा भएकाले अब सिँचाइ गर्नुपर्दैन । तर पानी परेर जमिन चिसो भएकाले मल राख्न सकिन्छ ।
हिउँद लागेपछि हरेक महिनाजसो पानी परेकाले यसले उत्पादन समेत बढाउन सक्ने सम्भावना छ । सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा पनि आकाशे पानीले जमिन भिजेकाले अब खनजोत गरी बीउँ राख्न र लहरे तरकारीका लागि बिरुवा उमार्न सकिन्छ ।
काँक्रो, फर्सी, चिचिण्डा र करेलालगायत लहरे तरकारीको बीउँ उमार्ने बेला भएको छ । यस्ता तरकारीलाई सिधै खेतबारीमा बीउँ रोप्नुभन्दा प्लाष्टिकको गुमोज बनाएर वा साना साना प्लाष्टिकका थैलामा माटो राखेर बीउ उमार्न सकिन्छ । यसरी उमारेको बिरुवा लगाए छिट्टै हुर्कन्छ ।
यस्तै, अहिलेको वर्षाले चैते धानलाई पनि फाइदा पु¥याएको छ । यो चैते धानको दाना लाग्ने बेला भएकोले यतिबेलाको वर्षाले दाना पुष्ट गराउन सहयोग गर्छ । यस्तै, अब मकै बाली लगाउने बेला भएको छ । तर बाली लगाउनुअघि किसानले बीउँ छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका र दर्ता भएका जातका बीउ मात्र किसानले लगाउनुपर्छ । यस्तै, यस्ता बीउँ खरिद गर्दा बिल अनिवार्य लिनुपर्छ । सरकारले नै सिफारिस गरेको र दर्ता भएको बीउँमा पछि केही समस्या देखिए किसानलाई राहत लिन बिलले प्रमाणको काम गर्छ ।
किसान आफैँ पनि सचेत नहुँदा बालीनालीमा नोक्सानी पुग्ने गरेको छ । हाइब्रिड जातका बीउँ छनौट गर्दा दर्ता भएको बीउँ मात्रै छनोट गर्नुपर्छ । अहिले बारा, पर्सा र रौतहटलगायतका तराईका जिल्लामा धान र मकैमा देखिएको समस्या पनि यस्तै हो ।
सरकारले दर्ता नै नगरेको बीउँ लगाइएकोले किसान समस्यामा परेका हुन् । व्यापारीले उही जातको तर फरक प्रजातिका बीउँ बेच्ने गरेकाले यस विषयमा किसान चनाखो हुनुपर्छ । यस्तै, घरमा नै बीउँ तयार पार्ने हो भने पनि सचेतना अपनाउनु पर्छ । मकैको बीउँ छान्दा टुप्पो र फेदपट्टीको दानाभन्दा बीचमा रहेका दानालाई बीउँका लागि छनौट गर्नुपर्छ ।
धानको बीउ पनि छाँटेर नुन पानीको घोलमा डुबाउने । अनि केही बेरपछि नुनपानीमा तैरिएको धानलाई छुट्टाएर मुनि रहेका धानलाई बीउँको रुपमा राख्नुपर्छ । यसरी बीउँ छनोट गर्दा पुष्ट दाना पर्छ । तर यसरी भिजाइएको धानको बीउँलाई घाममा भने सुकाउन हुँदैन ।
यस्तै, हिउँदे मकै लगाउँदा कार्तिक १५ गतेभन्दा अगाडि बीउ छर्नु हुँदैन । त्यसभन्दा अगाडि बीउ छरेका मकैमा दाना नलाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्तो बेला छरेका मकै पुस माघको शितलहरमा पर्न सक्ने हुन्छ ।
चिसोका कारण निष्क्रिय हुने हुँदा गर्भाधान हुन पाउँदैन र यसले गर्दा दाना लाग्न पाउँदैन । कार्तिक १५ गतेभन्दा पछि रोपेका मकैमा भने समस्या पर्न सक्ने जोखिम कम हुन्छ ।
(नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का बाली तथा बागवानी निर्देशक एंव वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपे्रतीसँग उज्यालो सहकर्मी दीपा तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
डा. हरिकृष्ण उप्रेती
उप्रेती नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का बाली तथा बागवानी निर्देशक एंव वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ ।